Qisada Muhiim - Soo Bandhigida Xaqiiqada
Intii ay ku sugnayd Ethiopia iyadoo ka soo kabanaysa dhaawacyo soo gaaray, ayay wax ka maqashay tahriibka Yurub.
“Markii aan Ethiopia imid ayaan maqlay in dadku Yurub aadaan” ayay tiri. “Waxaan maqlay in aad Ethiopia ka bixi karto oo Yurub loo tahriibi karo. Oo aad ku dhiman karto balse waxba kama ogeyn silica tahriibka.”
Iyadoo aan haysan lacag, qaraabo iyo aqoon ku filan oo tahriibka ah ayay qaadatay go’aanka tahriibka.
Halkaan waxay Muhiim ka waramaysaa safarkeedii ay kaga soo carartay Somalia ee ay ku soo gashay Ethiopia iyo Sudan ilaa Libya.
Ka dib 10 maalmood oo safar ah, kuwaasoo afar ka mid ah ay saxaraha lugeynayeen ayay Muhiim iyo dadkii la socday soo gaareen Libya. Qaar ka mid ah dadka ayaa looga soo tagay saxaraha daal iyo oon dartiis iyadoo qaarkood ay socon-waayeen kuleylka saxaraha dartiis. Waxay u muuqatay in dhimasho ay isku wareejisay.
Markii ay Libya soo gaareen ayuu safarka sii xumaaday. Muhiim iyo soo galootiga kale ayaa lagu haystay saxaraha muddo sadex bilood ah halkaasoo ay ku jirdileen muqalasiinta.
“Dumarka waa u darantahay. Inkasoo aysan u fududeyn ragga xitaa” ayay tiri. “Haddii uu rabo waxkasta ayuu kugu samaynayaa ragga hortiisa, xitaa waa ku qaawinayaa ragga hortiisa.”
Ugu dambeyntii, muqalasiintu waxay yaqiinsadeen in aysan wax lacag ah haysan, iyadoo uu mid ka mid ah uu ka dhigtay adoontiisa oo uu ku shaqaystay muddo afar bilood ah, isagoo ka dibna geeyay xeebta Tripoli.
“Waxkasta ayay igu sameeyeen” ayay tiri “Waxaan u sheegay in aanan hooyo lahayn aabane uusan telefoon lahayn. Waxkasta ayuu isku dayay balse wuxuu ogaaday in aanan haysan wax aan siiyo ka dibna waxa uu I geeyay gurigiisa si aan ugu shaqeeyo.”
Dhagayso Muhiim oo ka waramaysa dhibaatadii Libya
Markii ay Muhiim soo gaadhay Tripoli waxay u shaqo bilowday qoys si ay meel u dhigato lacag ay doonta ku raacdo. Labo goor ayay isku day’day in ay raacdo doonta balse waa la soo qabtay oo xabsi ayaa la dhigay. Waxay ku guuleystay markii sadexaad.
“Waxaad dareemaysaa in aad qof tahay,” ayay tiri . “Ka dibna waxaad dareemaysaa cilo, qoys la’aan iyo cadaadis. Laakiin waxkasta waa OK.”
Maanta Muhiim waxay ku nooshahay magaalada Milan ee wadanka Talyaaniga oo ay sharci ku leedahay. Waxay rajaynaysaa in ay shaqo hesho marka ay caafimaado.
“Hada waxaan ku suganahay xaalad wanaagsan, balse wali waxaan ahay qof bukaan ah tahriibka dartiis.” ayay tiri “Waxaan shaqayn karaa markaan bogsado.”
Dhagayso Muhiim oo ka waramaysa safarkii badda iyo nolosha Talyaaniga.
Taariikhda wareysiga: 27 August 2015 | Taariikhda la badalay: 15 April 2016 |